यो च्याउलाई सुँघेरै यौन उत्तेजित हुन्छन् महिला: वैज्ञानिकहरु छक्क! - Naya Pusta
यो च्याउलाई सुँघेरै यौन उत्तेजित हुन्छन् महिला: वैज्ञानिकहरु छक्क!
एजेन्सी । हवाइ टापुमा एक यस्तो च्याउ पाइन्छ जसलाई सुँघेरै महिनामा यौन उत्तेजना निकै बढ्छ । यो च्याउको गन्धले महिलाहरुमा तीव्र यौन उत्तेजना ल्याउने गरेको छ । यो च्याउको गन्ध मिठो हुँदैन । यसले निकै दुर्घन्ध फैलाउँछ तर यही दुर्घन्धले महिलामा यौन उत्तेजना जगाउँछ।
हवाइमा ज्वालामुसीको फेदमा उम्रिने यो च्याउ आफ्नो यही विशेषताका कारण विश्वप्रसिद्ध छ । वैज्ञानिकहरुले विगत १५ वर्षदेखि यसमाथि निकै विवादिन प्रयोगहरु गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म यसको गन्धले महिलाहरुमा के असर हुन्छ भन्ने पत्ता लागेको छैन।
यो च्याउको विषयमा १६ महिला र २० पुरुषमा प्रयोग गरिएको थियो। तीमध्ये ६ महिलाको कामोत्तेजना निकै बढेको र बाँकी १० को पनि मुटुको धड्कन बढेको पाइयो । तर, पुरुषहरुलाई भने यो गन्ध पटक्कै मन परेन । तर यो च्याउमा के हुन्छ र त्यसले महिलामा कहाँ कसरी असर गर्छ भन्ने अझै पत्ता लागेको छैन।
योनि निकै नै ठूलो छ ? यसले वैवाहिक जीवनमा कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
दैनिक ३ लाख चक्की सिटामोल उत्पादन गर्ने औषधि लिमिटेडको तयारी
कपिलवस्तुको हिमपात कृषि सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न, अध्यक्षमा सुवेदी